सेयर किन्न कुन दिन सबैभन्दा राम्रो ? बारको आधारमा पनि हुने गर्छ बजार घटबढ
नेपालमा सेयर बजारको इतिहास लामो नभए पनि विश्व इतिहासमा विगत चार शताब्दीदेखि यो चलिआएको छ । नेपालमा भने करिब २ दशक अघिदेखि मात्रै दोस्रो बजारमार्फत सेयर कारोबार हुन थालेको हो । तर पुँजी बजारको विकासलाई हेर्ने हो भने नेपालको बजारलाई भर्खर पालुवा पलाउँदै गरेको स्थितिका रुपमा लिन सकिन्छ । यो बजारले सिक्नुपर्ने कुराहरु पनि धेरै देखिन्छ ।
यसका लागि विश्वका पुराना सेयर बजारहरुको अनुभवहरु नै महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । सिक्न र बुझ्नका लागि आजको सूचना र प्रविधिको विकाशले धेरै सजिलो पनि बनाइदिएको छ । चार शताब्दी लगाएर विश्वका पुराना सेयर बजारहरुले सिकेका ज्ञान आज हामी छोटो समय र लगानीमा नै सिक्न सक्ने भएका छौं ।
हुन त विश्वका धेरै सेयर बजारहरुमा सबैका आ–आफ्नै विशेषता रहेका हुन्छन्, जसलाई त्यही बजारमा कारोबार गर्ने लाखौं लगानीकर्ताको किनबेच गर्ने व्यवहारले निर्देशित गरिरहेको हुन्छ । प्रत्येक सेयर बजारहरु पूर्णरुपमा युनिक हुन्छन् । कुनै एक देशको सेयर बजारमा लागू हुने लगानीका सबै रणनीतिहरु अर्को देश वा बजारमा हुबहु सोहीरुपमा लागू गर्दा फाइदाजनक नहुन पनि सक्छ । अथवा त्यसरी लागू नहुन पनि सक्छ ।
त्यसैले सेयर लगानीका रणनीतिहरु समय समयमा मूल्यांकन तथा परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्दछ । यसका लागि कि लगानीकर्ता आफैंले सेयर बजारको विश्लेषण गर्न सिक्नुपर्दछ अथवा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्श लिने बानी गर्न सक्नुपर्छ । यसले मात्र सफल लगानी गर्न सहज हुनेछ ।
नेपालको सेयर बाजारको इतिहास लामो नभएकाले सिक्ने कुराहरु धेरै रहेको माथि नै चर्चा गरिसकिएको छ । यसै सन्दर्भमा यहाँ नेपालको सेयर बजारले सिक्न आवश्यक रहेको केही महत्वपूर्ण विषयका बारेमा चर्चा गरिएको छ । यसपटक बजार खुल्ने दिनहरुका बारेमा जानकारी गराउन खोजिएको छ । पंक्तिकारले ‘बजार खुला हुने दिन’ हरुको आधारमा नेपालको बजारलाई अमेरिकाको बजारसँग तुलना गरेका छन् । यसले हाम्रो बजारमा सरोकारवालाहरुलाई राम्रो ज्ञान उपलब्ध गराउँछ भन्ने विश्वास गरिएको छ ।
तलको तथ्यांकलाई हेर्दा, अमेरिकाको सेयर बजार १ वर्षमा तुलना गर्दा नेपालको भन्दा २० दिन बढी खुल्दो रहेछ । हुन त अमेरिकाको सेयर बजारमा कारोबार हुने कम्पनीहरुको संख्या नेपाली बजारमा सूचीकरण भएका कम्पनीहरुको तुलनामा ज्यादै बढी छ । लगानीकर्ताको संख्या तथा लगानीका उपकरणहरु पनि असाध्यै धेरै छन् ।
तर पनि यो तथ्यांकले नेपाली सेयर बजार अमेरिकी बजारको तुलनामा औसतमा धेरै दिन बन्द हुने रहेछ भन्ने देखाउँछ । नेपाली सेयर बजारमा पनि कारोबार हुने कम्पनीहरुको वृद्धिसँगै बजार खुल्ने दिनहरु तथा
त्यस्तै, विगत ८ वर्षको एस एन्ड पी ५०० र नेप्से इन्डेक्सको दैनिक प्रतिफल हेर्दा, नेप्सेमा हुने उतारचढाव (रेन्ज) तुलनात्मक रुपमा कम देखियो । यसको मतलब नेप्से, एस एन्ड पी ५०० को तुलनामा थोरै भए पनि कम जोखिमयुक्त छ भन्ने बुझिन्छ । यसले, यदि अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायका लगानीकर्ताले नेपालको बजारमा पनि लगानी गर्ने हो भने (राम्रो कम्पनीमा लगानी गरेको खण्डमा) एस एन्ड पी ५०० को जस्तै वा सो सरहको उतारचढाव हुन सक्ने बजारमा नै लगानी हुने देखियो ।
तलको चित्रबाट थप के प्रष्ट हुन्छ भने विगत ८ वर्षमा एस एन्ड पी ५०० इन्डेक्सले ज्यादै थोरै पटक +५% र –५% का रेखाहरुलाई छोएको देखिन्छ । तर त्यसको विपरीत नेप्से इन्डेक्सको दैनिक प्रतिफलले धेरै पटक +५% र –५% का रेखाहरुलाई छोएको देखिन्छ । यसले छोटो समयका लागि नेप्सेमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुले एस एन्ड पी ५०० को तुलनामा धेरै पटक आफ्नो लगानीबाट नाफा लिन सक्ने अवस्थालाई देखाउँछ, यदि सेयर बजार घट्दा किन्ने र बजार बढ्दा बेच्ने रणनीति लागू गर्ने हो भने ।
सेयर बजारमा धेरै उतारचढाव हुनुले जोखिम पनि सोही अनुसार हुन्छ भन्ने बुझाउँछ । तर राम्रा कम्पनीका सेयरहरुमा लगानी गरी बढी जोखिम लिएको खण्डमा त्यस्तो लगानीबाट तुलनात्मक रुपमा बढी नै प्रतिफल हुन्छ भन्ने कुरा पनि सेयर बजारको सिद्धान्तमा पर्छ । त्यो सिद्धान्त अनुसार नेप्सेमा राम्रोसँग लगानी गर्ने हो भने छोटो समयमा नै रामो प्रतिफल लिन सकिन्छ भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । जसका लागि विषयवस्तुको गहन अध्ययन, आफ्नो लगानी रणनीतिको लगातार प्रयोग, लगानी रणनीतिको पुनर्मूल्यांकन तथा परिमार्जन लगायतको आवश्यकता पर्दछ ।
सातामा कुनै विशेष बारमा मात्र सेयर किन्ने वा बेच्ने :
वाल स्ट्रीटमा प्रचलित एक पुरानो उखान छ, ‘सेल इन मे एन्ड गो अवे’ । वित्तीय क्षेत्रमा रहेका मानिसको दैनिक गफगाफ तथा सञ्चार माध्यमहरुमा पनि यो भनाई बारम्बार सुन्न पाइन्छ । यो जस्तै अन्य विविध कथनहरु छन्, जसले सेयर बजार कुनै न कुनै हिसाबले चक्रीय पद्धति चल्दछ भन्ने कुरालाई निर्देशित गर्दछन् । ‘‘जनवरी इफेक्ट’’, ‘‘मन्डे इफेक्ट’’, ‘‘इन्ट्रा डे इफेक्ट’’ लगायत यसका उदारणहरु हुन् । यी कथनहरुले बजारमा कुनै निश्चित दिन वा प्रवृत्तिले पार्ने असरलाई जनाउँछ ।
सेयर बजारमा यी भनाईहरु पुस्तौं पुस्तादेखि चलिआएका हुन् । नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा पनि साताको पहिलो कारोबार दिन, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दिन लगायतले बजारमा असर पार्ने विश्वास गरिन्छ । तर आजको अवस्थामा पनि यी भनाईहरुमा के–कति विश्वसनीयता छ त ? भन्ने चाहिँ आफूले अध्ययन गरी लगानीको रणनीतिक निर्णयहरुमा यी भनाईका सारलाई प्रयोग गरेपछि मात्र थाहा पाउन सकिन्छ ।
सेयर बजारलाई जुवाघर हो भन्दै भाग्यमा विश्वास गरी लगानी गर्ने लगानीकर्ता पनि प्रसस्तै भेटिन्छन् । तर के भाग्यले मात्र सेयर बजारबाट कमाउन सकिन्छ त ? त्यस्तै, कतिपय मानिसलाई साताका कुनै दिन मात्र विशेष वा आफ्नो लागि राम्रो हुने जस्तो पनि लाग्दछ । सेयर बजारका लागि के यस्ता पक्षहरु उपयोगी हुन्छन् त ? यसका बारेमा पनि यहाँ चर्चा गरौं ।
विगत १४० वर्षको डाओ जोन्स इन्डेक्सको तथ्यांकले के देखाउछ भने साताको पहिलो सेयर कारोबार हुने दिन अर्थात सोमबार (अमेरिकाको लागि) सेयर बजार घट्ने गर्दछ । यसको पछाडि साताको अन्त्यमा आउने बजारका सूचनाहरु पहिलो दिनमा कारोबार हुने सेयरको मूल्यमा समायोजित हुने गर्छ भन्ने विश्वास छ ।
यसरी सेयर बजार घटेको दिनमा लगानीकर्ताले ‘नयाँ लगानी’ गर्ने र सोही साताको कुनै अर्को दिन (जुन दिन सेयर बजार बढ्छ) मा बेच्न सकेको खण्डमा छिटोछिटो मुनाफा कमाउन सकिन्छ । विगत ८ वर्षको तथांकलाई हेर्दा सोमबार एस एन्ड पी ५०० घट्ने र मंगलबार बढ्ने प्रवृत्ति देखियो । यसले छोटो समय (एक दिन) मा नै लगानीबाट प्रतिफल लिन सकिन्छ भन्ने देखाउँछ ।
जुन कुरा अमेरिकाको जस्तो सेयर बजारमा मात्र सम्भव हुन सक्छ । जहाँ पूर्णरुपमा अनलाइन कारोबार हुन्छ र विभिन्न सेयर ब्रोकरहरुले सुविधाका रुपमा आफ्ना लगानीकर्तालाई आज किनेको सेयर भोलिपल्ट नै बेच्न मिल्ने सुविधा पनि दिन्छन् ।
यता, सोही अवधिको नेप्सेको तथ्यांक हेर्दा, सामान्यतयः आइतबार समग्रमा सेयर बजार घट्ने र बिहीबार नेपाली सेयर बजार बढ्ने गरेको देखियो । यसले नेप्सेमा अनलाइन प्रविधि नभए पनि आइतबार किनेर बिहीबार बेच्ने हो भने तथा विगतको चक्र र प्रवृत्ति आगामी दिनमा पनि कायम रहने हो भने छोटो समयमा नै सेयर किनबेच गरी नाफा आर्जन गर्न सकिने अवस्था देखियो । तलको चित्रमा यो कुरालाई हेर्न पनि सकिन्छ ।
नेप्से इन्डेक्सको एक अनुसन्धानबाट विगत ३ वर्षको तथ्यांक मात्रै पनि भविष्यको अनुमानका लागि प्रयोग गर्न राम्रो हुने निष्कर्ष निष्किन्छ । यस आधारमा विगत तीन वर्षको मात्र तथ्यांकहरु अध्ययन गर्दा पनि औसतमा सोही प्रवृत्ति – आइतबार घट्ने र बिहीबार बढ्ने देखियो ।
अन्त्यमा, सेयर बजारमा कसैले पनि भविष्यका बारेमा कसैले पनि ठोकुवा गर्न नसक्ने भएकाले यो विश्लेषणको आधारमा कुनै संकेत लिन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास मात्र गरिएको हो ।
(कृपया यही विश्लेषणका आधारमा आफ्नो लगानीको निर्णय नगर्नुहोला । यो केवल जानकारी तथा शैक्षिक प्रयोजनका लागि तयार पारी तपाईंहरु समक्ष ल्याइएको हो । सेयरमा लगानी गर्दा तपाईंको पैसा घाटामा पनि जाने सम्भावना हुने भएकाले लगानी गर्नुपूर्व आफैं वा आफ्नो वित्तीय विश्लेषकसँग परामर्श गरी लगानी गर्न अनुरोध छ ।)